Digniin laga bixiyay Khatarta dib u dhigista Doorashada | Keydmedia
Digniin laga bixiyay Khatarta dib u dhigista Doorashada
Maamulka Farmaajo ayaa mudadii uu jiray ku guuldareystay qabashadda doorasho waqtigeeda ku dhacda, markii uu waqtigiisa uga harsan 5 bilood uu dhamaado.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa jira walaac laga qabo in dalka uu galo xaaladda deganaansho la'aan ah, kadib markii Farmaajo uu diiday inuu doorashadda ku qabto waqtigeeda, islamarkaana uu sameystay mudo korarsi sharci darro ah.
Siyaasiyiinta mucaaradka uu kamid yahay C/raxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Cali Wajiis oo Culimada Soomaaliyeed kamid ah, ayaa sheegay in hogaanka DF looga baahan yahay inuu dastuurka ku dhaqmo, sidoo kalena uu qabto doorashadda si looga badbaadiyo wadanka dhibaato ka dhacdo.
"Hadii dowladda waqtigeedu dhamaado, Madaxweynaha xanaasad ma lahan markaas isku mid ayaan nahay suuqa ayaan wada joognaa, waxii lakala helo ayaa Illaah naka siinaa," ayuu yiri CC Shakuur, oo ka hadlay Munaasabad ka dhacday Muqdisho.
Wuxuu xusay in Soomaaliya ay ku socoto wado horseedi doonta dagaal, hadii aan laga badbaadiyo oo madaxda haatan jirta aysan xal u helin khilaafka doorashooyinka ka taagan, kaasoo Maamul Goboleedyada iyo Farmaajo lagu wado inay uga doodaan Shir berri la qorsheeyay inuu uga furmo Muqdisho.
Xasan Sheekh, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa u sheegay Farmaajo in looga baahan yahay sidii isaga xilka uu ugu wareejiyay u dhiibo xukunka dalka, markuu waqtigiisu dhamaado, oo uusan kursiga isku sii dhejin.